Si toos ah bogga hore ee dashboardkaaga, milkiilayaasha meheradaha waxaa la siiyaa qalab lagu qiimeeyo wada sheekaysiga shabakadooda, oo ay ku jiraan macaamiisha suurtagalka ah isla markaaba markay caawimaad raadsadaan. Nidaamkoodu wuxuu kuxiranyahay macluumaadka khabiirka - milkiilaha ganacsiga - inuu bartilmaameedsado weedho khuseeya ganacsigooda. Ka dib markii la geliyo ereyada muhiimka ah, tani waxay dejineysaa Nidaamka Cobia ee loogu talagalay qaabka suuq geynta buuxda.
Qiyaas macmiil barta Twitter-ka wax ka qoraya sida qunyar u jiro xariiqda meheraddaada, ka dibna awood u leh inuu isla markaaba uga jawaabo kuub iyo raaligelin si uu uga caawiyo dhibaatadooda. Fursaduhu miyaanay u furi doonin meheraddaada?
Ganacsi iibinta baabuurta ayaa aqoonsan kara mid ka mid ah ereyada ugu caansan ee baraha bulshada, Waxaan rabaa gaari, oo leh jawaab loogu talagalay macaamilka iyada oo ku saleysan tirakoobyadooda - tani waa hawlgal shakhsiyeed oo loogu talagalay dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato. Inaad xakamayso waxa dadku kaa sheegaan adiga iyo ganacsigaagaba waa xudunta maaraynta sumcadda, taas oo nidaamkoodu ku dhiirrigeliyo wacyigelin iyagoo si fudud ugu jawaabaya boostada isticmaalaha.
Maaddaama ay tahay otomaatig ahaan ku darista waxyaabaha shirkaddu ka kooban tahay, qodobadani waxay saf u gali doonaan shaandhayntaada gaarka ah, ka dibna waxay ku dhejin doonaan darbigaaga Facebook ama Twitter muddo lix saacadood gudahood ah. Waxqabadka ku saabsan maqaalladaan caanka ah ee soo baxa, ee aad adigu iska baarto, ayaa markaa laguu arki doonaa shabakadda macmiilkaaga, iyadoo si muuqata u kordheysa gaaritaanka shirkaddaada.
Iyadoo Nidaamka Cobia'Muuqaalka ololaha, macaamiishaadu waligood kama maqnaan doonaan garaacida shirkaddaada. Qaab-dhismeedkooda dhexdiisa, waxaad ku abuuri kartaa ololeyaal suuq-buuxa ah oo ay ku jiraan sharraxaad iyo wacitaan-ku-dhaqaaq sida koodh xayeysiin ah. Adiga ayaa xakameyn doona inta ololahaagu socdo iyo cidda ku qaadeysa qaraxaaga masaafada ugu gaarka ah. Cobia, adeegsadayaashooda ayaa leh khibrad u leh kororka 100% ilaa 3,400% ee kuwa raacsan bogaggooda ganacsi iyagoo adeegsanaya ololahooda.